တာတမံဥပဒေ – laws | Kyaw Zaw Oo's Blog
(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၂။)
၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၁ ရက်
(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၈ ရက်)
၁။ ဤဥပဒေကို တာတမံဥပဒေ ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
(က) တာတမံ ဆိုသည်မှာ ရေကိုတားဆီးရန်၊ ထိန်းညှိရန် သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းရန် တည်ဆောက်ထားသည့် မြေသားနံရံ၊ ရေလှောင်တမံ၊ ရေချိုရေငန်တား တာတမံ၊ တာပေါင်တို့ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် တာတမံကို အထောက်အကူပြုသည့် ရေထုတ်ပြွန်၊ ဆိပ်ခံတံတား၊ ကတုတ်တန်း၊ ရေတံခါး၊ အဆောက်အအုံ၊ ရေမှတ်တိုင်၊ မြေအနိမ့်အမြင့်အမှတ်အသားလည်း ပါဝင်သည်။
(ခ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။
(ဂ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။
(ဃ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်တာတမံအရာရှိ ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေရှိ ဦးစီးဌာန တာဝန်ခံကို ဆိုသည်။
(င) ခရိုင်တာတမံအရာရှိ ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ် ခွင့်ရဒေသ သို့မဟုတ် ခရိုင်ရှိ ခရိုင်ဦးစီးဌာန တာဝန်ခံကို ဆိုသည်။
(စ) မြို့နယ်တာတမံအရာရှိ ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရှိ ဦးစီးဌာနတာဝန်ခံကို ဆိုသည်။
(ဆ) တိရစ္ဆာန် ဆိုသည်မှာ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆင်၊ မြင်း၊ လား၊ ဝက်၊ သိုးနှင့် ဆိတ်တို့ကို ဆိုသည်။
(ဇ) အရေးပေါ်လုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တာတမံကျိုးပေါက်ပျက်စီးမှု ဖြစ်ပေါ်စေ နိုင်သည့်အခါဖြစ်စေ၊ တာတမံကျိုးပေါက်ပျက်စီးသည့်အခါဖြစ်စေ အချိန်မီ ပြင်ဆင်ရသော လုပ်ငန်းကိုဆို သည်။
(ဈ) ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ တာတမံ၏ ကြံ့ခိုင်မှုစွမ်းအား ပြည့်မီစေရန် သတ်မှတ်ချက် များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရသောလုပ်ငန်းကို ဆိုသည်။
(ည) ပန်းတာ ဆိုသည်မှာ ပင်လယ်ရေငန်တား တာ သို့မဟုတ် ရေဘေးကာကွယ်ရေး တာများသည် ရေကြီး၊ ရေလျှံ၊ ရေတိုက်စားမှုများကြောင့် တာကျိုးပေါက်မည့် စိုးရိမ်ရသော အခြေအနေရှိပါက လက်ရှိ တာတမံ၏ နောက်ဘက်တွင် အသစ်တည်ဆောက်သည့် တာတမံကို ဆိုသည်။
(ဋ) အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဆိုသည်မှာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ အုပ်ချုပ်ရေး မှူးများကို ဆိုသည်။
(က) နိုင်ငံတော်အတွင်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ချနိုင်ရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရေးတို့အတွက် တာတမံများတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်၊
(ခ) တည်ဆောက်ပြီး တာတမံများကို ရေရှည်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ရန်၊
(ဂ) တည်ဆောက်ပြီးတာတမံများ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းမှ ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်နှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လာပါက ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု နည်းပါးစေရေးအတွက် အရေးပေါ်ကာကွယ်မှုလုပ်ငန်း များကို ပြည်သူများက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်၊
(ဃ) တာတမံများ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် စည်းကမ်းချက်များကို ပြည်သူများ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် သိရှိနိုင်စေရန်။
၄။ ဝန်ကြီးဌာနသည် ရေဘေးကာကွယ်ရေးတာတမံနှင့် ရေငန်တား တာတမံများ အသစ်တည်ဆောက် ရာတွင်ဖြစ်စေ၊ လက်ရှိတာတမံသည် စိုးရိမ်ရသော အခြေအနေရှိ၍ ပန်းတာ တည်ဆောက်ရာတွင်ဖြစ်စေ နိုင်ငံတော်အစိုးရက မြေအသုံးပြုရန် လိုအပ်သည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာဒေသရှိ ပြည်သူများ ကြိုတင်သိရှိနိုင်ရန် လုံလောက်သော အချိန်ပေး၍ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်ရမည်။
၅။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် တာတမံအရာရှိ သို့မဟုတ် ယင်းက တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသော ဦးစီးဌာနအရာရှိသည် ပုဒ်မ ၄ အရ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်သည့်နေ့မှစ၍ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ညှိနှိုင်းပြီး တာတမံနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့် ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
၆။ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ပုဒ်မ ၄ ပါ တာတမံတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ယင်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်မြေယာများ၊ အဆောက်အဦများ၊ သီးနှံများဆုံးရှုံးမှုအတွက် လျော်ကြေးတောင်းခံနိုင်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဒေသရှိ ပြည်သူများ ကြိုတင်သိရှိရန် လုံလောက်သော အချိန် ပေး၍ ကြေညာရမည်။
(၁) လျော်ကြေးတောင်းဆိုမှုများရှိပါက သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း၍ စစ်ဆေး ရမည်။
(၂) စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ လျော်ကြေးပေးရန် တာဝန်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိလျှင်လျော်ကြေးငွေကို ဥပဒေနှင့်အညီ သတ်မှတ်ရမည်။
(ခ) ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ လျော်ကြေးငွေသတ်မှတ်ချက်ကို မကျေနပ်လျှင် လျော်ကြေးတောင်းဆိုသူသည် အမိန့်ချမှတ်သည့်နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ သို့မဟုတ် နေပြည်တော်ကော်စီသို့ အယူခံဝင်ရောက်နိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် နေပြည်တော်ကောင်စီသည် ယင်းလျော်ကြေးငွေသတ်မှတ်ချက်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။
(ဂ) လျော်ကြေးငွေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် နေပြည်တော်ကောင်စီ၏ အဆုံးအဖြတ်သည် အပြီးအပြတ် အတည်ဖြစ်သည်။
(ဃ) လျော်ကြေးငွေပေးချေခြင်းကို ဦးစီးဌာန၏ ငွေစာရင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။
၈။ လျော်ကြေးပေးသည့် ကိစ္စရပ်များ ပြီးပြတ်သည့်အခါ ခရိုင်တာတမံအရာရှိသည် တာတမံလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
၉။ ပန်းတာတည်ဆောက်ရန် မြေနေရာလိုအပ်ခြင်း၊ စွန့်ပစ်မြေများ စုပုံခြင်းကြောင့် မြေနေရာများ ဆုံးရှုံး ခြင်းအတွက် လျော်ကြေးတောင်းခံလာမှုများကို ခရိုင်တာတမံအရာရှိသည် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ လွှဲပြောင်းပေးရမည်။
၁၀။ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ပုဒ်မ ၉ ပါ လျော်ကြေးငွေတောင်းဆိုမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပုဒ်မ ၇ နှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။
၁၁။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် တာတမံအရာရှိ၊ ခရိုင်တာတမံအရာရှိနှင့် မြို့နယ်တာတမံအရာရှိ တို့သည် တည်ဆောက်ပြီးတာတမံများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်-
(က) မြစ်ကမ်းတိုက်စားမှုအခြေအနေကို နှစ်စဉ်နိုဝင်ဘာလတွင် တိုင်းထွာစစ်ဆေးခြင်း၊
(ခ) ထူးပေါက်နှင့် တွင်းများကို ပြန်လည်တူးဖော်ဖယ်ရှားခြင်း၊ မြေသားအသစ်ထည့်ခြင်းလုပ်ငန်းများ နှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ) နှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလတွင် ရေမှတ်တိုင်များကြံ့ခိုင်မှု ရှိ မရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အသစ်စိုက်ထူ ခြင်း၊
(ဃ) မိုးရာသီအတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ရေကြီးရေမှတ်များအရ သတ်မှတ်သည့် တာတမံ၏ ရေလွတ်တာပေါင် ရှိ မရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊ တာမြှင့်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို အစီအစဉ်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(င) တာတမံများ စစ်ဆေးရာတွင် သတ်မှတ်ပုံစံအရ တာအမြင့်၊ တာထိပ်အကျယ်နှင့် တာအောက်ခြေ အကျယ် မပြည့်မီပါက ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ) ဦးစီးဌာနက ထိန်းသိမ်းထားသော တာတမံများ၏ နယ်နိမိတ်များအတွင်း ကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေ ထိုင်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ မွေးမြူခြင်း၊ လွှတ်ကျောင်းခြင်း ရှိ မရှိ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဆ) ရေတံခါးများ၊ ရေပြွန်များကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်း၊
(ဇ) ကျေးရွာလူထု၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သော ရေဘေးကာကွယ်ရေး တာတမံများအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးခြင်း။
၁၂။ ပုဒ်မ ၁၁ ပါ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် သာမန်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အထူးပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း အဆင့်သတ်မှတ်၍ ဆောင်ရွက်ရမည်။
၁၃။ ခရိုင်တာတမံအရာရှိသည် တာတမံတည်ဆောက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောက်ပါအချက်များကို ပြည်သူနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်-
(က) တာတမံများ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တာတမံနှင့်ဆက်စပ်နေသော ပြည်သူလူထု၏ လိုအပ် ချက်များကို သိရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) တာတမံနယ်နိမိတ်အတွင်း ကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်းကြောင့် တာတမံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ပြည်သူနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ) အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပန်းတာတည်ဆောက်ရာတွင် လယ်ယာမြေသိမ်းယူရေးအတွက် ထိခိုက် နစ်နာမည့် လယ်သမားများနှင့် သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တို့၏ ဆန္ဒကိုရယူပြီး လိုအပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်သို့ တင်ပြညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) တာတမံပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် တာတမံနှင့် ဆက်စပ်သောလယ်သမားများနှင့် သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အကြံပြုချက်များကို အထက်အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်သို့ တင်ပြခြင်း။
၁၄။ တာတမံအရာရှိသည် ရေဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအတွက် အောက်ပါတို့ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင် ရွက်ရမည်-
(က) မိုးရာသီမကျရောက်မီ တာတမံများ တောင့်တင်းခိုင်မာစေရန် စက်အင်အား၊ လူအင်အားများဖြင့် ကြိုတင်ပြုပြင်ခြင်း၊
(ခ) ကမ်းရိုးပြိုခြင်း၊ လှိုင်းရိုက်၍တာပြိုခြင်း၊ တာမြေမှရေစိမ့်ခြင်း၊ သဲဗွက်ထခြင်းနှင့် တာအိတာလျောခြင်း များမဖြစ်စေရန် ချို့ယွင်းချက်ရှိသော နေရာများကို အချိန်မီပြီးစီးအောင် ပြင်ဆင်ခြင်း၊
(ဂ) မိုးရာသီရောက်ရှိလျှင် သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ရေကင်းတဲများ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အရေးပေါ် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ ကြိုတင်စုဆောင်းခြင်း၊
(ဃ) မြေပြင်အခြေအနေအရ ရေကင်းစောင့်အဖွဲ့များဖွဲ့၍ တာဝန်ချထားခြင်းနှင့် အချိန်ပြည့်ဆက်သွယ်နိုင် သော ဆက်သွယ်ရေးစခန်းများထားရှိခြင်း၊
(င) စိုးရိမ်ရေမှတ်ရောက်ချိန်မှစ၍ ရေပြန်ကျသည့်အချိန်အထိ အထူးကိစ္စအနေဖြင့် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာသို့ မပျက်မကွက် သတင်းပေးပို့ခြင်း၊
(စ) သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုများမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ညှိနှိုင်း၍ ရေဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး စီမံချက်များ ရေးဆွဲထားရှိခြင်း၊
(ဆ) ရေဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်နိုင်သောဒေသရှိ ပြည်သူများကို ကြိုတင်အသိပေးခြင်းနှင့် အရေးပေါ် အစီအမံများ ဆောင်ရွက်ထားရှိခြင်း၊
(ဇ) အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်ပါက တာတမံ မကျိုးပေါက်စေရန်အတွက် လိုအပ်သောလုပ်အားနှင့် အထောက်အကူပစ္စည်း အကူအညီရရှိရန် သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၁၅။ တာတမံကျိုးပေါက်ပျက်စီးနိုင်သည့် အန္တရာယ်ကျရောက်လျှင် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သို့မဟုတ် နေပြည်တော်ကောင်စီ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်-
(က) ရေဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်နိုင်သော တာတမံများကို ကာကွယ်ရန် ရေကင်းစောင့်အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း၍ တာဝန်ချထားမည့် အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း၊
(ခ) အရေးပေါ်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လုပ်အားပေးနိုင်မည့် လူစာရင်းကို ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြုစု၍ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ တစ်ဆင့် တင်ပြစေခြင်း၊
(ဂ) အရေးပေါ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် တွေ့ရှိရသော အတားအဆီးများကို ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် အရေး ပေါ်လုပ်ငန်းများ၌ သုံးစွဲရန်လိုအပ်သည့် သစ်ပင်၊ ဝါးပင်၊ သစ်သား၊ ဖျာ၊ ဝါးထရံ၊ ကြိုး၊ မြေကြီး၊ အိတ်နှင့် အခြားပစ္စည်းများ သယ်ယူရန်ယာဉ်တို့ကို နီးကပ်ရာဒေသများမှ ရယူအသုံးပြုခြင်း။
၁၆။ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ အရေးပေါ်လုပ်သားစာရင်းကို ခရိုင်တာတမံ အရာရှိထံ ပေးပို့ရမည်။
၁၇။ ခရိုင်တာတမံအရာရှိ သို့မဟုတ် ယင်းကတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည့် မြို့နယ်တာတမံအရာရှိသည် ပုဒ်မ ၁၆ အရ လုပ်သားများရရှိရေးအတွက် ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ တောင်းခံရမည်။
၁၈။ ပုဒ်မ ၁၇ ပါ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူများသည် မြို့နယ်တာတမံအရာရှိ သို့မဟုတ် တာဝန်ရှိသူ၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
၁၉။ (က) အရေးပေါ်လုပ်သားများအတွက်လည်းကောင်း၊ ပစ္စည်းကိရိယာများ ရယူသုံးစွဲခြင်းနှင့် သယ်ယူ ခြင်းအတွက်လည်းကောင်း၊ ပစ္စည်းများဖယ်ရှားရာတွင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်လည်းကောင်း ကျခံရန် လိုအပ်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များကို ခရိုင်တာတမံအရာရှိက ဒေသအလိုက် အမြင့်ဆုံးဈေးနှုန်းဖြင့် သက်ဆိုင် သူများသို့ ဆောလျင်စွာ ထုတ်ပေးရမည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ထုတ်ပေးသည့် ငွေပမာဏနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မကျေနပ်သူသည် ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ တင်ပြနိုင်သည်။ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ငွေပမာဏနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
(ဂ) ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ် အတည်ဖြစ်သည်။
၂၀။ မည်သူမျှ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ တာတမံ၏ မြေလွှာကို ပျက်စီးစေနိုင်သည့် တူးဆွခြင်း၊ လှေ၊ သစ်ပင်၊ သစ်တုံး၊ ဝါး၊ ဝါးစည်းစသည့် ပစ္စည်းများကို တာတမံပေါ်မှ ဖြတ်ဆွဲခြင်းမပြုရ။
၂၁။ မည်သူမျှ တာတမံခိုင်ခံ့မှုကိုဖြစ်စေ၊ တာတမံကို အထောက်အကူပြုသည့် အဆောက်အအုံများကိုဖြစ်စေ ပျက်စီးစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရ။
၂၂။ မည်သူမျှ တာတမံပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ တာတမံ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်းတွင် လည်းကောင်း ကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူခြင်း၊ အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် စက်ယန္တရားတစ်ခုခု ထားရှိအသုံးပြုခြင်းမပြုရ။
၂၃။ မည်သူမျှ တာတမံပေါ်တွင်ဖြစ်စေ၊ တာတမံ၏ နယ်နိမိတ်အတွင်းတွင်ဖြစ်စေ တိရစ္ဆာန်တို့ကို လွှတ် ကျောင်းခြင်း သို့မဟုတ် စားကျက်ချခြင်း မပြုရ။
၂၄။ မည်သူမျှ ဦးစီးဌာနက မိုးရေတိုက်စားမှုကာကွယ်ရန် တာတမံပေါ်တွင် ထိန်းသိမ်းထားသော မြက်ပင်၊ ကိုင်းပင်နှင့် အကာအကွယ် ပစ္စည်းတို့ကို ဖျက်ဆီးခြင်းမပြုရ။
၂၅။ မည်သူမျှ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ တာတမံနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ရေနုတ်မြောင်း သို့မဟုတ် ရေတံခါးကို ပိတ်ပင်တားဆီးခြင်း သို့မဟုတ် ရေစီးရေလာနှောင့်နှေးအောင် ပြုလုပ်ခြင်းမပြုရ။
၂၆။ မည်သူမျှခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ တာတမံပေါ်တွင် ယာဉ်များဖြတ်သန်း မောင်းနှင်ခြင်းမပြုရ။
၂၇။ မည်သူမျှ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ တာတမံဖြင့် ရေဘေးကာကွယ်ထားသော ဧရိယာအတွင်း တာတမံ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ရေနုတ်မြောင်း တူးဖော်ခြင်းမပြုရ။
၂၈။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၅ နှင့် ၂၇ တို့ပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို နှစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်။
၂၉။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၀၊ ၂၃၊ ၂၄ နှင့် ၂၆ တို့ပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ခြောက်လထိ ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်တစ်သိန်းထိ ငွေဒဏ် ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၃၀။ ဤဥပဒေပါ ပြစ်မှုများကို ရဲအရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသော ပြစ်မှုများအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
၃၁။The Embankment Act. (Burma Act IV, 1909.) အရ ထုတ်ပြန်ထားသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဤဥပဒေနှင့် မဆန့်ကျင်သရွေ့ ဆက်လက်ကျင့်သုံးနိုင် သည်။
၃၂။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်-
(က) ဝန်ကြီးဌာနသည် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘော တူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
(ခ) ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနတို့သည် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
၃၃။ The Embankment Act. (Burma Act IV, 1909.) ကို ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
Next တိပိဋကဓရ တိပိဋကကောဝိဒ ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေ